Thit Htoo Lwin: 4/22/12 - 4/29/12
Start Mar 6,13
နေ့ စဉ် သတင်းများ ရှာဖွေရန်
19/05/13 - 26/05/13 (120)
12/05/13 - 19/05/13 (258)
05/05/13 - 12/05/13 (231)
28/04/13 - 05/05/13 (206)
21/04/13 - 28/04/13 (165)
14/04/13 - 21/04/13 (142)
07/04/13 - 14/04/13 (173)
31/03/13 - 07/04/13 (201)
24/03/13 - 31/03/13 (201)
17/03/13 - 24/03/13 (208)
10/03/13 - 17/03/13 (209)
03/03/13 - 10/03/13 (195)
24/02/13 - 03/03/13 (217)
17/02/13 - 24/02/13 (192)
10/02/13 - 17/02/13 (214)
03/02/13 - 10/02/13 (202)
27/01/13 - 03/02/13 (201)
20/01/13 - 27/01/13 (229)
13/01/13 - 20/01/13 (210)
06/01/13 - 13/01/13 (185)
30/12/12 - 06/01/13 (211)
23/12/12 - 30/12/12 (202)
16/12/12 - 23/12/12 (187)
09/12/12 - 16/12/12 (210)
02/12/12 - 09/12/12 (199)
25/11/12 - 02/12/12 (163)
18/11/12 - 25/11/12 (177)
11/11/12 - 18/11/12 (185)
04/11/12 - 11/11/12 (180)
28/10/12 - 04/11/12 (135)
21/10/12 - 28/10/12 (171)
14/10/12 - 21/10/12 (147)
07/10/12 - 14/10/12 (155)
30/09/12 - 07/10/12 (172)
23/09/12 - 30/09/12 (161)
16/09/12 - 23/09/12 (97)
09/09/12 - 16/09/12 (169)
02/09/12 - 09/09/12 (169)
26/08/12 - 02/09/12 (163)
19/08/12 - 26/08/12 (191)
12/08/12 - 19/08/12 (163)
05/08/12 - 12/08/12 (163)
29/07/12 - 05/08/12 (162)
22/07/12 - 29/07/12 (178)
15/07/12 - 22/07/12 (134)
08/07/12 - 15/07/12 (136)
01/07/12 - 08/07/12 (159)
24/06/12 - 01/07/12 (111)
17/06/12 - 24/06/12 (149)
10/06/12 - 17/06/12 (148)
03/06/12 - 10/06/12 (147)
27/05/12 - 03/06/12 (136)
20/05/12 - 27/05/12 (161)
13/05/12 - 20/05/12 (140)
06/05/12 - 13/05/12 (149)
29/04/12 - 06/05/12 (155)
22/04/12 - 29/04/12 (169)
15/04/12 - 22/04/12 (118)
08/04/12 - 15/04/12 (144)
01/04/12 - 08/04/12 (220)
25/03/12 - 01/04/12 (186)
18/03/12 - 25/03/12 (171)
11/03/12 - 18/03/12 (180)
04/03/12 - 11/03/12 (201)
26/02/12 - 04/03/12 (190)
19/02/12 - 26/02/12 (203)
12/02/12 - 19/02/12 (203)
05/02/12 - 12/02/12 (209)
29/01/12 - 05/02/12 (218)
22/01/12 - 29/01/12 (175)
15/01/12 - 22/01/12 (161)
08/01/12 - 15/01/12 (148)
01/01/12 - 08/01/12 (140)
25/12/11 - 01/01/12 (156)
18/12/11 - 25/12/11 (143)
11/12/11 - 18/12/11 (144)
04/12/11 - 11/12/11 (165)
27/11/11 - 04/12/11 (164)
20/11/11 - 27/11/11 (139)
13/11/11 - 20/11/11 (130)
06/11/11 - 13/11/11 (126)
30/10/11 - 06/11/11 (108)
23/10/11 - 30/10/11 (131)
16/10/11 - 23/10/11 (119)
09/10/11 - 16/10/11 (69)
02/10/11 - 09/10/11 (84)
25/09/11 - 02/10/11 (64)
18/09/11 - 25/09/11 (62)
11/09/11 - 18/09/11 (59)
04/09/11 - 11/09/11 (45)
28/08/11 - 04/09/11 (59)
21/08/11 - 28/08/11 (58)
14/08/11 - 21/08/11 (49)
07/08/11 - 14/08/11 (52)
31/07/11 - 07/08/11 (54)
24/07/11 - 31/07/11 (37)
17/07/11 - 24/07/11 (26)
26/06/11 - 03/07/11 (32)
19/06/11 - 26/06/11 (31)
12/06/11 - 19/06/11 (23)
05/06/11 - 12/06/11 (35)
29/05/11 - 05/06/11 (29)
22/05/11 - 29/05/11 (23)
15/05/11 - 22/05/11 (25)
08/05/11 - 15/05/11 (35)
01/05/11 - 08/05/11 (33)
24/04/11 - 01/05/11 (31)
17/04/11 - 24/04/11 (10)
10/04/11 - 17/04/11 (11)
20/03/11 - 27/03/11 (5)
13/03/11 - 20/03/11 (6)
မိုးကုတ်မြို့ မှ နိကာယ်သာသနာရေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ကျပ်ပြင်အုပ်စု၊ဂေါင်းဦးဘာရပ်ကွက်၊သီရိမင်္ဂလာ ရတနာ ဘုံမြင့် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီးတွင် ၁၃၄၆ ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်း (၇) ရက်နေ့မှစတင်၍ နိကာယ်ငါးရပ်ပိဋကတ်သုံးပုံစာမေးပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပပြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စည်ကားစွာကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ (၂၃) ကြိမ်မြောက်သည်အထိ မည်သည့်ပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါ။
(၂၃) ကြိမ်ကျော်လာသည်မှစ၍ အခြေအနေများရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပါသည်။
ထိုမှတဆင့်တိုး၍ နိကာယ်အသင်းပိုင်ငွေများအား ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊အတွင်းေ၇းမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်တစုတို့သည် ထင်သလိုချယ်လှယ်သုံးစွဲရန်အတွက် အလှူငွေများ စာရင်းလိမ်ခြင်း၊၄င်းတို့အဖွဲ့နှင့်နှစ်ရှည်ချေးယူထားသောသာသနာပိုင်ငွေများကိုလည်းပြန်လည်ပေးဆပ်မှုမရှိခြင်းတို့အားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုလုပ်လာကြပါသည်။ အဆိုးဆုံးမှာကား ၄င်းတို့ချေးယူထားသော အသင်းပိုင်ငွေများပြန်မဆပ်ချင်ကြတော့၍ အလုံးစုံသိထားသောကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားကျောင်းမှထုတ်ကြံစည်ခဲ့ကြပါသည်။ဆရာတော်သာမရှိတော့လျှင် ငွေများပြန်ဆပ်ရန်မလိုဘဲ မိမိတို့သဘောကျချယ်လှယ်နိုင်ရန်အတွက် ပက်စက်သောအကြံ ဖြင့် မာတုဂါမ ဖြင့်စွပ်စွဲ၍ မြို့နယ်သံဃနာယကသို့တိုင်ကြားကြပါသည်။ ၄င်းစွပ်စွဲချက်အားအခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက်ဟုယူဆ၍ မြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့မှ ပလှပ်ခဲ့ပါသည်။၄င်းတို့အရေးနိမ့်သောအခါ အရှက်မဲ့စွာဖြင့် မိမိတို့မှားပါသည် ၊ခွင့်လွှတ်ပေးပါဟူ၍ ဆရာတော်အားဝန်ချတောင်းပန်ပွဲပင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။သို့သော်ငွေများကိုဆက်လက်လိမ်လည်သုံးစွဲလိုသဖြင့်နိကာယ်စာမေးပွဲကို မည်သည့်အဖွဲ့ကိုမျှလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းမပြုဘဲ ၄င်းတို့ပင်ဆက်လက်ကျင်းပရန် အတင်းအကြပ် ကြံစည်ကြပြန်ပါသည်။ ဆရာတော်နှင့် နိကာယ်အသင်းသူ၊အသင်းသား တို့မှ အသင်းပိုင်စာရင်းရှင်းတင်ပြန်ရန်တောင်းဆိုကြရာ ဖြေရှင်းခြင်းမပြုဘဲ မိုးကုတ်မြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘဋ္ဌေး အားကိုးဖြင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား စည်းရုံးပူးပေါင်း၍ ဖြေရှင်းမပေးကြပါ။နိကာယ်စာမေးပွဲကိုလည်း ဂေါင်းဦးဘာရပ်ကွက်မှလွှဲ၍ အခြားရပ်ကွက်တွင် ကျင်းပခွင့်မရှိ ဟု စည်းကမ်းချက်ရှိသော်လည်း ဆရာတော်ကြီးများချမှတ်တော် မူခဲ့သော သာသနာ့ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မထေမဲ့မြင်ပြု၍ ကျပ်ပြင် (အ.ထ.က) စာသင်ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
တိုင်းသံဃနာယကညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဂေါင်းဦးဘာရပ်ကွက်မှလွဲ၍ အခြားနေရာတွင် မကျင်းပရဟုတားမြစ်ချက်၊ မြို့နယ်သံဃနာယကမှလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် မညီမညွတ် ကွဲပြားနေသေးသမျှ စာမေးပွဲ ရပ်နားထားရမည်ဟု တားမြစ်ချက်တို့ကို လျစ်လျူရှု မခန့်လေးစားပြု၍ ၄င်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘဋ္ဌေး ကိုယ်တိုင် ၀န်ကြီးချုပ်အမိန့်ဟုပြောဆို၍ အမိန့်စာမပြဘဲ နှုတ်မိန့်ဟု ပြောဆိုကာ အာဏာကို လက်တလုံးခြား အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဥပဒေအထက်တွင်မည်သူမျှမရှိစေရဟူသော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ စကားရပ်ကိုပင် ဂရုမစိုက်ဘဲ ထင်ရာစိုင်းနေကြပါသည်။၎င်းတို့အဖွဲ့များမှ(၁) နိကာယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်ဇော် (သီတဂူ ဆေးရုံအုပ်) သည် အဖွဲ့မှ ထင်သလိုပရမ်းပတာ ပြုလုပ်နေသည်ကို သိလျက်နှင့် အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်နေသည်မှာ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနှင့်တန်ပါသေးသလား?
(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘဋ္ဌေး ၏ ခမည်းခမက် နိကာယ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဥိးလှဋ္ဌေးသည်လည်းမိမိ အဖွဲ့ဝင်များ နှစ်ရှည်ချေးငွေများပြန်မဆပ်ခြင်း၊ ငွေတိုးမဆပ်ခြင်း၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှလှူဒါန်းသောငွေပင်ငွေရင်းများလိမ်လည် မှုတို့ကိုသိလျက်နှင့် မသိဟန်ဆောင်၍နေခြင်း၊ဆက်လက်လိမ်လည်ခွင့်ပြုနေခြင်းတို့သည် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဟူသော ရာထူးဂုဏ်ပုဒ်နှင့် တန်ပါသေးသလား? (၃) အတွင်းရေးမှူးဦးမောင်မောင်သည်လည်း ကိုယ်တိုင်ချေးယူထားသောငွေများ အရင်းရော အတိုးပါမဆပ်ခြင်း၊ငွေစာရင်းလိမ်လည်မှုတို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နေခြင်းတို့သည် သံဃိကပစ္စည်း၊သာသနာပိုင် ဘဏ္ဍာဟူသော အသိတရားမရှိတော့ပြီလော၊ကျန်ချေးယူသုံးစွဲနေသောသူများသည်လည်းသံသရာကိုမကြောက်ပြီလော?
(၄) မိုးကုတ်မြို့မျက်နှာဖုံး သူဋ္ဌေးကြီး သီရိသုဓမ္မ မဏိဇောတဓရ ဘွဲ့ရ လည်းဖြစ်သော၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သူဋ္ဌေးကြီး ဦးဘဋ္ဌေး သည်လည်း (၂၅) ကြိမ်မြောက်နိကာယ်စာမေးပွဲတွင် ဆွမ်းတစ်ကြိမ် ကပ်ရုံဖြင့် ရာသက်ပန် ဆွမ်းဒါယိကာ သာသနာ့ကျေးဇူး ရှင်ကြီးဟု စာအုပ်တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံဝံ့သည်အထိ အရှက်မဲ့သွားပြီလော ?
ယခုတစ်ဖန် (၂၇)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲတွင်လည်း မိမိ ဂုဏ်တက်ေ၇းအတွက် သူတစ်ပါးရပ်ကွက်တွင် ၀င်ရောက်ကျူးကျော် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြန်ပါသည်။(2012 ခုနှစ်၊4လပိုင်း)ယခင်ကလည်း ပန်းမရပ်ကွက် ပန်းမအထက်ကျောင်းဆရာတော်အား မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံသတင်းဖြင့် ကျောင်းမှနှင်ထုတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။(စာသင်သံဃာများပါနှင်ထုတ်ခဲ့သည်)မိမိ၏စည်းစိမ်အာဏာကိုအားကိုး၍ ထင်ရာစိုင်းနေသည်မှာ မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိ၍လော ဤ အကြောင်းများကြောင့် ဂေါင်းဦးဘာ နိကာယ်အသင်းသူအသင်းသားတို့မှာ မည်သူ့ကို အားကိုးရမည်မသိတော့ပါ။
သာသနာကို ချစ်မြတ်နိူးကုန်သော သံဃမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများနှင့် နိူင်ငံတော်အကြီးအကဲများမှ ကူညီဖြေရှင်းပေးတော်မူကြပါရန် ဤစာမျက်နှာမှ အားကိုးစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများသည် ပုဂိုလ်ရေးမုန်းတီးမှုလုံးဝမပါရှိဘဲ အမှန်တရားများကိုဖေါ်ပြ၍ သာသနာ့ဂုဏ်ရောင်ထွန်းပြောင်စေခြင်းအတွက် နှောင်းလူများ ဆင်ခြင်နိုင်ရေးသာ စေတနာရှေ့ထား ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း သာသနာကိုယုံကြည်သက်ဝင်စောင့်ရှောက်ကြသူများ (မိုးကုတ်မြို့ )
နိကာယ်အသင်းပိုင်ငွေများအား ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊အတွင်းေ၇းမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်တစု နှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသည့် အထောက်အထားဓါတ်ပုံများ အောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
5/01/2012 11:15:00 PM
ဝှေဖလာရွှေမှော်မှ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်ကြောင့် လူနေအိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းများမှာ ပြိုဆင်းနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ နောင်တောကျေးရွာအုပ်စု၊ဝှေဖလာရွှေမှော်မှ လူနေအိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းများမှာ နောင်တောကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် ရန်ပုံငွေအတွက်အကွက်ရိုက်ရောင်းချခဲ့သော ဆိုင်ခန်းများဖြစ်ပါသည်။
ရွှေကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်မဆွဲခင်ကတည်းက နောင်တောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်ရန်ပုံငွေအတွက် ရောင်းချခဲ့သောနေရာများဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ဆွဲသူများ ရှိလာပြီးနောက် ၎င်းနေအိမ်များကို'ရွှေရောင်ကောင်းသောမိတ်ဆွေများ' ကုမ္ပဏီမှ နေရာဖယ်ခိုင်းခဲ့သည်။ ဤကိစ္စကိုဆိုင်ခန်းနှင့်၊ နေထိုင်သူပြည်သူများ မကျေနပ်၍ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ဒေသခံအာဏာပိုင်များအား 27-2-2012 တွင် တိုင်ကြားခဲ့ပါသော်လည်းပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းပေးပဲ ကုမ္ပဏီဘက်မှ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့ရာ '' ရွှေရောင်ကောင်းသောမိတ်ဆွေများ "ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကြောင့် ဟုမ္မလင်း-နောင်ပိုအောင်-ဝေဖလာ-နမ့်တောကျေးရွာခြင်းဆက် ကားလမ်းဘေးကပ်လျှက် လက်ရှိနေထိုင်ကြသော လူနေအိမ်နှင့်ဆိုင်ခန်းများမှာ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ကွက် ချောက်ကြီးထဲသို့ တဖြေးဖြေးနှင့်ပြိုကျပျက်စီးလျှက်ရှိနေပါသည်။
နောင်တောကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်နေအိမ်ပျက်စီးသွားသူဘက်မှ ရွှေကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူအားနေအိမ်ဝင်းအစားပေးရန် တောင်းခံခဲ့ပါသော်လည်း ကုမ္ပဏီဘက်မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဝှေဖလာရွှေမှော်နေ ပြည်သူများစိတ်သောကရောက်နေရကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင် လူကြီးမင်းများနှင့်အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောင်ကျော် (ဟုမ္မလင်း)
Myanmar News Now ဓါတ်ပုံ- ဝှေဖလာရွှေမှော်သား
5/01/2012 10:38:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဘန်ကီမွန်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်/သံ)
နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် မှာ ပြောင်းလဲပြင်လွယ် ရှိမှုဟာ မိမိတို့ အမြဲယုံကြည်ခဲ့တဲ့ အရာဖြစ်ပြီး အခုလို လွှတ်တော်ထဲဝင်ခါနီးမှ မဟုတ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနှင့် အတူ ယနေ့ မနက်က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
5/01/2012 10:30:00 PM
“၈၈” မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့် ရပ်ဆောက်ပြည်သူလူထုတွေ့ ဆုံပွဲ
အင်္ဂါနေ့၊မေဒေးနေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရပ်စောက်မြို့သို့“၈၈” မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊
မသက်သက်အောင်၊မမီးမီး၊မယုယုလှိုင်၊မနီလာသိန်း၊မမာမာဦး၊မခင်မိုးအေးတို့အပါအ၀င် “၈၈” အခြားကျောင်းသားတို့သည်
နံနက် ၁၀း၀၀ ခန့်တွင်ရောက်ရှိလာပါတယ်။
၂း၃၀ နာရီခန့်တွင် မြို့နယ်N L D ရုံးသို့သွားရောက်ကာ ပါတီဝင် လူကြီး၊လူငယ်များနှင့် မိတ်ဆက်အမှာစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရုံးမှပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အပြင်သို့ထွက်ရောက်ချိန်တွင် မြို့ခံပြည်သူ
လူထုမှတောင်းဆိုသဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်နှုတ်ဆက်အမှာစကားများပြောကြားပြီးတောင်ကြီးမြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။
5/01/2012 10:19:00 PM
NLD သဘောထားပျော့ပြောင်းမှု ဘန်ကီမွန်း ချီးကျူး
ဓာတ်ပုံ ASSOCIATED PRESS
စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအကျိုးအတွက် အလျှော့အတင်း လုပ်ပေးကြ စမြဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် Ban Ki Moon ကပြောလိုက်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ၃ ရက်ခရီးလာခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံအပြီးမှာ ခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း အလျှော့အတင်း လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ NLD အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်လုံး အလျှော့အတင်း လုပ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်ပြီးပြောပါလိမ့်မယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် အကဲခတ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဟာ ဒီကနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ရှေ့ဆက် အပြောင်းအလဲတွေလုပ်သွားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းကို အတွင်းရေးမှုးချုပ် Ban Ki Moon က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊
- လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ နောက်ပြန်မလှည့်ဘဲ ရှေ့ဆက်သွားသင့်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ပါဝင်ချင်စိတ် ရှိသူ တွေကို ကျနော်တို့က ကူညီ အားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေရောက်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါ တော်တော်လေး လုပ်ခဲ့ကြရပြီး နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာကိုလည်း Mr. Ban Ki Moon က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုရာမှာ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံနိုင်ပေမဲ့ ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် အလျှော့ပေးပြီး NLD ကလွှတ်တော်တက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲတာကိုလဲ ခုလို ချီးကျူးပါတယ်၊
- ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲချခဲ့ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဆိုတာ တချို့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ သဘောထားအမြင် မတူတာမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအကျိုးအတွက် အလျှော့အတင်း လုပ်ပေး ကြစမြဲဖြစ် ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အတွက် လေးစားပါ တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ လွှတ်တော်အမတ် တယောက် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထိရောက်နဲ့ အပြုသဘောဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ညင်သာပျော့ပြောင်းမှုရှိရမယ်လို့ NLD က အမြဲလက်ခံထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်၊
- နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြုနိုင် ပြင်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့က အမြဲ လက်ခံ ထားပါတယ်၊ အခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်လာလို့ ပျော့ပြောင်း ညင်သာဖို့ လိုပြီလို့
သဘောထား တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရေးအရ ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ ကာလ တလျှောက်လုံးမှာ ဒီအချက် ကို လက်ခံ ယုံကြည်ခဲ့ကြတာပါ၊ ကျွန်မတို့ရည်မှန်းချက်တွေကို အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ရနိုင်ဖို့ ကလည်း ဒီတနည်းနဲ့ပဲ ရနိုင်မှာပါ၊ ဒါကြောင့် လွှတ်တော် တက်တော့မှာမို့ ပြုနိုင် ပြင်နိုင်တဲ့ထုံးကို လက်ကိုင် ထားလိုက်တယ် လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်ကျော်ကာလ တလျှောက်လုံးမှာ ဒီထုံးကို ကျွန်မ တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းနာတခု အဖြစ်နဲ့ သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
ရှေ့လာမယ့် လတွေ နှစ်တွေမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေဆုံးဖြတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ နောင် မျိုးဆက်ပေါင်း များစွာရဲ့ အနာဂါတ်ကို ပုံဖော်မှာဖြစ်လို့ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကာလကို နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြတ်သန်း ရမှာဖြစ်တယ်၊ ရဲ့ရင့် ပြတ်သားမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ အပေးအယူလုပ်မှုတွေ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်က အလေးထား ပြောသွားခဲ့ ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကိုလျှောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်း ဆက်လက် အားပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
- မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ အစိုးရဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းပေါ်ရောက်နေကြပါပြီ၊ အားလုံး ပါဝင်ခွင့် ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုလဲမြတ်နိုးကြပါတယ်၊ သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း တခုလုံး ရဲ့ ထောက်ခံ အားပေးမှုကို ရသင့်ပါတယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ အတူလက်တွဲပြီး တတ်နိုင်သမျှ ဆက်ပြီး ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာတဲ့ မြန်မာအစိုးရအပေါ် နိုင်ငံတွေက ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပိုပြီး ပေးလာနေ ကြပါတယ်၊ ဒီအကူအညီတွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်၊
- မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကူအညီပဲပေးပေး၊ လူသားချင်းစာနာမှုအတွက် အကူအညီ ပဲ ပေးပေး၊ ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစတွေ တိုးတက်ရေး၊ အစိုးရအပေါ် မှီခိုမှု နည်းသွား နိုင်ရေးတွေမှာ ဒီထောက်ပံ့မှုတွေကို သုံးသင့်ပါတယ်၊ ဒါမှသာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး ဆောင်ရွက် မှုတွေဟာ လမ်းမှန်ပေါ် ရောက်ဖို့ အာမခံနိုင်မှာပါ၊ ခုလို ကျွန်မရဲ့ စိုးရိမ်မှုကိုလည်း အတွင်းရေးမှုးချုပ် နားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ တတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ်လူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့ပြီး ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်၊
By စုမြတ်မွန် (ဗီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း) သစ်ထူးလွင်
5/01/2012 09:54:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကုလသမဂ္ဂသို့ လာရောက်ရန် ဘန်ကီမွန်း ဖိတ်ကြား
ကုလသမဂ္ဂ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံအပြီး သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ရန် ထွက်အလာ
ဘန်ကီမွန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံ (မေလ ၁ ရက်-၂၀၁၂)
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် မေလ ၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဘန်ကီမွန်းက သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ၎င်းအနေဖြင့် အားရကျေနပ်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှလည်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိကြောင်းတို့ကို ပြောဆိုသွားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကုလ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကုလသမဂ္ဂသို့ လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားလိုက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အနေဖြင့် သွားချင်စိတ်ရှိကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးပြီးနောက် အချိန်ကျလျှင် အကြောင်းပြန်ပါမည့်အကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့သည်။ (သတင်းဓါတ်ပုံ-ကျော်စိုးလင်းYPI)
Yangon Press International
5/01/2012 01:41:00 PM
စစ်တွေ၊ အမ်း၊ မင်းဘူး (မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း) မီးရထားလမ်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့မှနေ၍ မြို့နယ် (၅) မြို့နယ်ကို ဖြတ်လျှက် မြန်မာစစ်တပ်၏ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ရှိရာ အမ်းမြို့သို့ ဆက်သွယ်သော မီးရထားလမ်းသစ်
တည်ဆောက်မှုကို (၂ဝဝ၉) ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းတလျောက်ရှိစစ်တွေမြို့၊ပုဏ္ဍားကျွန်း မြို၊ ကျောက်တော်မြို့၊မြောက်ဦးမြို့၊အမ်းမြို့နယ်များအတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူများ၏အိုးအိမ်ရပ်ရွာများအားအတင်းအကျတ်
လျော်ကြေးငွေလုံးဝမပေးဆောင်ပဲ အရပ်သားများ၏ လယ်ယာ ဥယျာဉ် ခြံမြေ အများ
အပြားကို ဥပဒေမဲ့ သိမ်းယူခဲ့ခြင်း၊ဒေသခံစစ်တပ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ရထားလမ်းဖေါက်
လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများက လုပ်ခများ မပေးဘဲဒေသခံပြည်သူများအားအတင်းအကျတ်
ပူပြင်းလှပြီးအရိပ်အာဝါသမရှိသော ကွင်းပြင်များတွင်လုပ်အားပေးစေခိုင်းခံရမှုကြောင့် ဖျားနာသေဆုံးခြင်း ရေရှားပါးမှုကြောင့်ဝမ်းပျက် ၀မ်းလျောဖြစ်ကာသေဆုံးခြင်းများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးသေဆုံးမှုများရှိခဲ့သော်လည်းမည်သည့်သတင်းမှထွက်ပေါ်မလာပဲ
(၂ဝ၁ဝ) ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သော မြောက်ဦး ကျောက်တော် မီးရထားလမ်းပိုင်းကြောင့် အေဒီ (၁၄ဝ၄) ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန် တည်ဆောက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးရှိ၊ ရှေးဟောင်း ကျောင်းကန်၊ ဘုရားများ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။
ပေါ်ရှိ ဘုရားများအပြင် ပြည်စိုးကြီးဘုရား၊ ငကြေးအိုင် နှင့် ရဲလှရှိ ကျုံးများ၊ မင်းသမီးဆည
တစ်ချိန်တည်း ၂၀၀၉ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတွင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
ကောင်စီ (နအဖ) က ကြက်ဆူပင် စိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နယ်မြေလူထုများအား
မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရှေ့ဟောင်း နန်းတော်ကုန်းကို ဖျက်ခိုင်းကြောင်းလည်း ကြားသိရသည်။ နယ်သူနယ်သားများက မီရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ကြပြီး၊ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းကို ရပ်တန့်ပေးရန် အာဏာပိုင်များထံ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် အစိုးရက အကြောင်းတစုံတရာ ပြန်ကြားခြင်း မရှိဘဲ၊ စီမံကိန်းကို ဆက်လက်၍ အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည်။
ဒေသခံလူထုများက သယ်ယူပို့ဆောင်ဆောင်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်ကို အလွန်တရာ
လိုလားကြသည်။ အကြောင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လမ်းများသည် အခြေအနေအလွန်ဆိုးရွား
နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။လက်ရှိအနေအထားအရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကားလမ်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပျက်စီးလျက်ရှိပြီး ပြည်သူလူထုမှာ ရေကြောင်းခရီးကိုသာအားထားသွား
နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ပုံတွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းစစ်တွေကျောက်တော်ရထားလမ်းပိုင်းမှာ နွေရာသီတွင်ပင်ယိုယွင်းပြိုပျက်နေပြီးရထားသွားလာမှုအတွက်စိတ်ချရသည့်အနေအထား
မပြုမှီကပင်ပျက်စီးလျက်ရှိပြီး ခရီးသွားပြည်သူများမှာရထားလမ်းကားလမ်းများကိုကြည့်ပြီး အထူးစိတ်ဆင်းရဲလျက်ရှိနေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ခိုင်ဇော်အောင် (Myanmar News Now)
5/01/2012 01:33:00 PM
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံ (ဓါတ်ပုံ)
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ မေလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင်အချိန် တစ်နာရီကျော် အကြာ တွေ့ဆုံအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ။
5/01/2012 01:06:00 PM
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ ရပ်စောက်မြို့ခရီးစဉ် (ဓါတ်ပုံ)
မေလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၂
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများ ယနေ့ နံနက် ရှမ်းပြည်နယ် ရပ်စောက်မြို့ ရောက်ရှိသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်စောက်မြို့ ခံ လူထုနှင့်တွေ့ ဆုံပြီး ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
Myanmar News Now သစ်ထူးလွင်
5/01/2012 12:42:00 PM
နှစ် ၃၀ အတွင်း မြန်မာ သန်းခေါင်စာရင်း ကုလအကူအညီ ဖြင့်ကောက်မည်
ဓာတ်ပုံ ASSOCIATED PRESSကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ အခမ်းအနား တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ မိန့်ခွန်း ပြောကြားပုံ။ နေပြည်တော်၊ မြန်မာ။ ဇူလိုင် ၁၁ ၂၀၁၁။ပြောင်းလဲမှုတွေ ထဲမှာ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ အဓိက အပြောင်းအလဲ အဖြစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူဖို့ အတွက် နှစ်ပေါင်း ၃၁ နှစ်အတွင်း ပြန်ပြီး စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂတို့ အကြားရခဲ့တဲ့ ဒီသဘော တူညီချက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ဒယ်နီရယ် ဘန်စတိန်း (Danielle Bernstein) သတင်းပေးပို့ ထားတာကို မခင်မျိုးသက် က တင်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအစိုးရက ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူဖို့ ကတိပြု ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါတယ်။ စာထဲမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၁ နှစ် အတွင်း ကောက်ယူမယ့် လူဦးရေစစ်တမ်းကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ့အညီလုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ဒီသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ လူမျိုးမရွေး ဘာသာ မရွေး ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသူတွေကို နိုင်ငံအနှံ့ သွားရောက် ခွင့်ပေးဖို့ပါ ပါဝင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ အခု လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကနေ ဒီသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး ဖြစ်မြောက် လာစေဖို့ မျှော်လင့် ထားသလို လူနဲစု တိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ လူမှု့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိကျမှုရှိတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူဖို့ ကိစ္စဟာ မြန်မာ အစိုးရ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ထဲမှာ အရေး အကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ လူ့အခွင့်ရေး စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သုတေသနမှုး ဒေ့ဖ် မက်သီဆန် (Dave Mathieson) ကပြောပါတယ်။“တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ သန်းခေါင်စာရင်း ရှိခဲ့ရင် နိုင်ငံသားတိုင်း မဲပေး ပိုင်ခွင့်ရှိ လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အခုထက်ပို မျှတပြီး အများရဲ့ လက်ခံ ယုံကြည်မှု ကိုလည်း ပိုပြီး ရလာဖို့ ရှိပါတယ်။ နောက် လူထုအပေါ်မှာ တကယ်ပဲ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလူတွေမဲပေးလာကြမှာပဲ။”မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က နောက်ဆုံး သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက အမဲရောင် နယ်မြေ လို့ခေါ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေထိုင်သူတွေ ကို ထည့်တွက်တာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအရင်က အများလက်ခံလောက်တဲ့ လူဦးရေ စာရင်းကောက်ခဲ့တာကတော့ ၁၉၃၁ ခုနှစ် မှာဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ် နေတုန်းက ကောက်ယူခဲ့တဲ့ သန်းကောင်စာရင်းပါ။လူ့အခွင့်ရေး စောင့်ကြည့်သူ တွေကတော့ သန်းခေါင်စာရင်း ကို သေသေချာချာ မကောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် ထည့်သွင်းရေး မသွင်းရေး အငြင်းပွါးနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံထဲ က တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွါးနေတဲ့ နေရာတွေမှာ နေထိုင်သူတွေကို စာရင်းထဲ ကနေ ဖယ်အထုတ်ခံ ရမှာကို စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ တသန်းလောက်နေထိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ကောက်ယူ မှတ်တမ်းတင်ရေးမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အကြီးအကဲ ဦးမြင့်ကြိုင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နိုင်ငံမဲ့သူများဆိုတာ ရှိမနေဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။“ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ နိုင်ငံမဲ့ သူများဆိုတာရှိ မနေသလို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မနေကြလို့ပါ" လို့ စကားပြန် က တဆင့် ပြောသွားတာပါ။ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကတိပြုထားတဲ့ အစိုးရကိုရော သန်းခေါင်စာရင်း ရဲ့ တိကျမှု ဆိုင်ရာအတွက်ပါ ဒီလို အမျိုး ခွဲခြားမှုမျိုးတွေက အဓိကစမ်းသပ်မှု လိုဖြစ်နေတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေ အတွက် အစိုးရရဲ့ ယုံကြည်လောက် စရာမရှိတဲ့ စာရင်းဇယားတွေကိုဘဲ နှစ်ပေါင်း များစွာ သုံးစွဲနေ ကြရတာမို့ အခုလို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနဲ့ အညီ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုက အရေးပါတယ်လို့ မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်သူတွေက ပြောပါတယ်။ဒီသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးအတွက် (UNPF) လို့ခေါ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေဆိုင်ရာ ရံပုံငွေအဖွဲ့ ကနေ အချက်အလက် စုဆောင်းကာလ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၂နှစ်အတွင်းမှာ ဦးဆောင်ပြီး စူးစမ်း လေ့လာမှု တွေ လုပ်မှာဖြစ်သလို မှတ်တမ်းတွေကိုလည်း ပြုစုရေးသားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မိုဟာမက် အဒယ် အဟက် (Mohamed Abdel-Ahad) ကတော့ သန်းခေါင်စာရင်း နောက်ဆုံး ကောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ဟာ သိပ်ကြာနေပြီမို့ ဒါဟာ တကယ့် စိန်ခေါ်မှု တရပ်ဖြစ်နေသလို ဒါဟာ အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ဆောင်ရမှာလည်း ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။"အားလုံး သိတဲ့အတိုင်းပဲ လူထုက ဒီသန်းခေါင်စာရင်း နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သေသေချာချာ သိမထားဘူး။ သန်းခေါင်စာရင်း နောက်ဆုံးယူ ထားတာက နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်နေပြီ ဆိုတော့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မွေးတဲ့သူတွေ ဆိုရင် သန်းကောင် စာရင်းယူတဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ ထည့်သွင်းရေတွက်ဖို့ လိုတယ် ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့က ရှင်းပြဖို့ လိုပါတယ်။"သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသူတွေကတော့ သန်းခေါင်စာရင်း ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ကောက်ယူနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထား ကြောင်း မစ္စတာ အဒယ် အဟက် ( Abdel-Ahad ) က ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂက အနေနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းအတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၃ သန်းလောက် ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။
By ခင်မျိုးသက် (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း)
5/01/2012 11:42:00 AM
သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ထပ်စော်ကားလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်
လယ်/ဆည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် (ဓါတ်ပုံ-Hot News)
အများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Hot news Journal မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လွှတ်တော်ကကောင်တွေ ဆယ်တန်းမအောင်ပါဘူးလို့ အစချီကာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောထားခဲ့တဲ့ လယ်/ဆယ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ကို လွှတ်တော်အမတ် (232)ယောက်ကနေ တောင်းဆိုချက်အရ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီမှာ ၂၉.၄.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အစီအရင်ခံစာအတိုင်း ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် က ရှင်းလင်းပါတယ် ။သူ့ရဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်မှာ ဟိုပုတ်ခတ်ဒီပုတ်ခတ် (သူ့နဂိုရ် အကျင့်အတိုင်း)ပေါ့။ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးပူးပေါင်းမှုကော်မတီက ``အစိုးရအဖွဲ့ကို မတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာက လွှတ်တော်ကို ဆိုလိုတာပါလား တစ်ခြားဘယ်သူကို ရည်ရွယ်ပါသေးသလဲ´´ဟုမေးမြန်းရာ----
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က ``ကျနော်က လွှတ်တော်ကို မရည်ရွယ်ပါဘူး ကျနော်တို့ ပြည်တွင်ပြည်ပ မီဒီယာတွေဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို မတည်ငြိမ်အောင်၊ စည်းလုံးမှုတွေ ပြိုကွဲအောင် ဖန်တီးလိုတဲ့ အသံတွေ၊ စာနယ်ဇင်းတွေ ဂျာနယ်တွေ--- အဲဒီထဲမှာ ကောင်းတဲ့ ဂျာနယ်တွေရှိသလို မကောင်းတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ မကောင်းတာတွေကများပါတယ်။ အမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြ၊ ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြ နဲ့ ကျနောတို့ကို တစ်ခုဟုတ် မဟုတ် ကြားလေသွေးဆွေးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်နေကြတယ်လို့ ဖြေကြားခြင်းသာဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ကို ရည်ရွယ်ခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး´´ လို့ မီဒီယာသမားစော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုပြင် `` ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က တည့်တည့်မတ်မတ်ကလေး ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဥပဒေက ကမောက်ကမဖြစ်နေရင် အစိုးရကိုဝေဖန်နေရင် မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကဏ္ဍကလည်း ၀ိုင်းသမနေရင် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး လှေကြီးနစ်သွားရင် ဘယ်သူနစ်နာမလဲ။ ပြည်သူပဲ အရင်နစ်နာလိမ့်မယ်။ လှော်တဲ့ကောင်ကလဲလှော်ရမယ်။ ထိုင်တဲ့ကောင်ကလဲ ထိုင်နေရမယ်။ အသက်ကြီးသွားရင် ငြိမ်နေရမယ်။ အငြိမ်မနေပဲ ထိုင်နေရင် ဘုန်းကြီးရူးနဲ့လှေလူး ဖြစ်လိမ့်မယ်´´ဟုသော စကားရဲ့ အဓိပါယ်အား ရှင်းခိုင်းရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က `` ကျနော်ဂျာနယ်တွေ အတော်များများဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ဖတ်ရင် မကောင်းတာတွေချည့်ပဲ။ စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့ဗျာ။ အမှန်ကတော့ အဲဒိဟာတွေပဲ။ ကျနော်ဂျာနယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သူတို့ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ကျနော်တို့လွှတ်တော်၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားပြုမယ့် ဂျာနယ်လေးတစ်ဆောင်လောက် ပေါ်လာမလားလို့ အားကိုးမိတာပါ´´ဟု ဂျာနယ်တွေမကောင်းကြောင်း၊ မကောင်းတာတွေ့ချည့် ဂျာနယ်များမှ ရေးသားကြောင်း၊ ဂျာနယ်များသည် လွှတ်တော်နှင့်အစိုးရအား ကိုယ်စားမပြုကြောင်း အတင်းတုတ်ခဲ့ပြန်သည်။
နေပြည်တော်သတင်းထောက် (Myanmar News Now)
5/01/2012 11:03:00 AM
၁။ 23-4-2012 (တနင်္လာနေ့) ည (၈း၀၀) နာရီ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတစ်ခုမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း (ဒေါက်ချာချမ်း) ကို စာစစ်ဥပေဒနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြနေတာမြင်ရတော့။ ဒီလူတွေ (အချို့အပေါင်းပါ) လွှတ်တော်အရှေ့မှာ နေရာပေးတာ ယခင်ကြိုးနီစနစ်က ဘယ်ညာလွှဲပြီးဆက်ပြီး ရှင်သန်နေရာ ရောက်တယ်။ ဒေါက်ချမ်း (အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အခေါ်) ပညာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူစဉ်ကာလတလျှောက် အခြေခံပညာကို ကောင်းကောင်းကြီးဖျက်ဆီးသွားတဲ့နံပါတ် (၁) တရားခံပါ။ ဥပမာတစ်ခုကိုပဲ ပြောပါရစေ ဒေါက်တာဘွဲ့ရတာတက္ကသိုလ်က ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ရာထူးခန့်ထား တာဟာ အခြေခံပညာကို ဖျက်စီးလိုက်တာဘဲ။ ပညာရေးသဘောတရားနားမလည်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ တယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ဘာသာရပ်မှာ အထူးကျွမ်းကျင်တာ (Professional) လို့ထင်ပါတယ်။ [ဒေါက်တာ တွေအသိဆုံးပါ ကျွမ်းကျင်လား၊ တတ်လားမတတ်ဘူးလားဆိုတာ] အဲဒီလိုဘာသာရပ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်တာနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်တာဝန်ပေးတာဟာ တခြား ဆီပါ။ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆိုတာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို စီမံရတယ်၊ အုပ်ချုပ်ရတယ်၊ သင်ကြားရတယ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာ၊ ဆရာမများကို မောင်နှမလို၊ မိသားစုလို၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အကြံဉာဏ်ယူရတယ်၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ကလေးငယ်များအတွက် စံပြနမူနာပြုရတယ်၊ ဆရာဂုဏ်၊ သမားဂုဏ်၊ နာယဂုဏ်(၆) ပါးနဲ့ညီညွှတ်ရတယ်။ အသက်အရွယ်၊ လုပ်သက်အတွေ့ အကြုံ၊ ပညာကြီးရတယ်။ ဒါမှတာ အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းကို တိုးတက်အောင်၊ စည်းကမ်းရှိအောင် ဦးဆောင်ရင်း လိမ္မာတဲ့၊ တော်တဲ့၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်ဆရာ၊ ဆရာမများနဲ့အတူ မွေးထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ကြည့်ပါဦး ဒေါက်ချမ်းလုပ်ခဲ့တာက သူလိုဒေါက်တာဘွဲ့ရတွေ သူ့ကိုယှဉ်မှာစိုးလို့ တက္ကသိုလ်မှာ မထားတော့ဘူး အခြေခံကျောင်းတွေကို ပို့ခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာဆိုတဲ့(အထက်တန်းကျောင်းအုပ်လုပ်နေသူများ) လူတွေကလည်း ကိုယ့်ပညာကိုယ်မှ တန်ဖိုးမထား၊ ပညာမာနမရှိ(အရှက်မရှိ) ကိုယ့်ဌာန (မိမိMajor-ဥပမာ မြန်မာစာ ဌာန)၊ မိမိတက္ကသိုလ်တို့ကို သစ္စာဖောက်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းအုပ်နေရာကို စီးပွားရေးတစ်ခုလို အသုံးချပြီး ၀န်ကြီးဆီအတင်းကပ်ဖား၊ မရ/ ရအောင်သိန်းဆယ်ချီကန်တော့ တဲ့သူတွေ အခုတော့ ဒေါက်ချမ်းက အခြေခံပညာကို ကောင်းကောင်းကြီး အမွေဆိုးပေးခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာတွေဆိုတာ လူကလည်းမလောက်လေးမလောက်စား၊ အသက်ကလည်းငယ်၊ မဟုတ်တဲ့ပညာ မာနကလည်းရှိ၊ ဒေါက်တာဆိုကို ပါးစပ်ကမချဘူး။ အခြေခံပညာသဘောတရားလည်းနားမလည်။ ဆရာလုပ်သက် ၊ ပညာရေးလုပ်သက် ၊ အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိဆိုတော့ အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းကို ဘယ်လိုစပြီး ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာ နည်းမလည်ဘူး။ သူတို့သိတဲ့ စီးပွားရေး(ငွေ) တစ်ခုတည်း ဘယ်လိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကို နည်းမျိုးစုံ မတရား(လောဘကြီးစွာ) နဲ့နေ့တစ်ဓူဝကြိုးစားကြတယ်။ လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ကြပါ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဒေါက်တာတွေကုပ်စုပ်တဲ့အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွေ ဘယ်လောက်တိုးတက်လာသလဲ ဆိုတာလက်ချိုးရေပြီးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ကြပါ။ ဒါတောင် ဒေါက်ချမ်းက သူ့ရဲ့လူတွေကို ကောင်းတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကိုပဲ ရွေးပြီးပေးခဲ့တာ။ ရန်ကုန်မှာဘဲကြည့်ကြည့်၊ မန္တလေးမှာဘဲ ကြည့်ကြည့် ဒေါက်တာတွေကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုပေါင်းများစွာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတယ်။
ဒေါက်ချမ်း(ဒေါက်ချာကြီး) က မတရားတာမှလွန်ရော သူရဲ့ဒေါက်တာတွေကို အခြေခံကသူ့အဆင့်လိုက် တက်လာတဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေထက် လစာ ပိုပေးထားတယ်။ ဒေါက်ချမ်းမြှောက်စားတော့ လူပါးဝလိုက်တာမှ လွန်ပါလေရော၊ ဒေါက်တာတွေ ကျောင်းအုပ်အချင်းချင်းမပြောနဲ့ သူတို့အထက်က မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတွေ၊ တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးတွေ ကိုတောင် လူမထင်ဘူး။ ထစ်ကနဲဆို ၀န်ကြီးဆီဖုန်းဆက်လိုက် မယ်နဲ့အမြဲချိမ်းခြေက်ပြီး ရတဲ့အခွင့်အရေးအကုန်ယူတယ်။
ဒေါက်တာကျောင်းအုပ်တွေလည်းတော်တော်လေးချမ်းသာသွားကြပါပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ်ကားအမျိုးမျိုး (၃-၄) စီးနဲ့၊ အိမ်တွေ၊ ခြံတွေ၊ မြေကွက်တွေ၊ ရွှေတွေနဲ့ သူဋ္ဌေးဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ ဒီဖက်မှာလည်း ကျောင်းသူ၊ ကျောုင်းသားတွေ အကျင့်ပျက်၊ စာရိတ္တယိုးယွင်း၊ စာခိုးတတ်တဲ့ အချောင်သမားလေးတွေ၊ ကျောင်းပြေးတဲ့ ဝေလေလေလူငယ်တွေ တိုးပွားလာပါပြီ အနာဂတ်အတွက် ရတနာဆိုး တွေ များများထွက်လာပါပြီ။
ဒေါက်တာတွေကို ပိုပြီးချမ်းသာစေတဲ့ အဓိက အချက်တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ် အဲဒါက ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှာ ခေတ်စားတဲ့ Day, Night, ဘော်ဒါ၊ ကျူရှင်တွေ၊ Private School တွေ [သီးခြားဖော်ပြ၊ ရေးသားပါဦးမည်] ပါ။
ဒေါက်တာတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ အသက်ငယ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိတော့၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို သူတို့အိမ်က အခိုင်းအစေအတိုင်းဘဲ ၊ မောက်မောက်မာမာဆက်ဆံတယ်၊ မတူမတန် ငါကျောင်းအုပ်ပဲ ဆိုပြီး ပညာပြတယ်။ မလိုအပ်တာတွေကို ချဲ့ပြီး ခိုင်းတယ်၊ အစည်းအဝေးတွေကို အချိန်ကြာမြှင့်စွာ လိုရင်းမရောက်နိုင် ဘဲ ညနေကျောင်းဆင်းကနေ ညနေ(၅/ ၆) နာရီအထိလုပ်တယ်။ ကျောင်းဆင်းပြီးလည်း မပြန်ခိုင်းသေးဘဲ လက်မှတ် ထိုးစာအုပ်ကို သိမ်းထားတယ်။ နောက်ကျမှ ပြန်ခိုင်းတယ်။ ငါကျောင်းအုပ်ပြန်မပြောနဲ့၊ ငါကျောင်းအုပ်ငါခိုင်းတာလုပ် ၊ ငါကျောင်းအုပ်ငါပြောတာလုပ်။ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ကျောင်းတွေကို အုပ်ချုပ်နေကြတာ။ ဒီကြားထဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေ ကပါလာသေးတယ်မဟုတ်လား
ပြောရရင်တော့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေ ဒေါက်တာကျောင်းအုပ်တွေကြောင့် လုံးဝ ဥဿုန် ပျက်စီးသွားပါပြီ။ ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းလည်းနားလိုက်ပါတော့ လွှတ်တော်ကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါ၊ ပညာရေးကော်မတီ ကတော့နှုတ်ထွက်လိုက်ပါ။
[မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အဆိုကို လွှတ်တော်အတည်ပြု အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအေးကြူက နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုများဖြင့် (၂၅၈၆) ဦးတို့အား ပြည်ပသို့စေလွှတ်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်တိုးချဲ့စေလွှတ်လျက်ရှိကြောင်း] သစ်ထူးလွင်မှ ပြန်လည်ကောက်နုတ်ချက်
ပြည်ပကို ပညာတော်သင်တွေ နှစ်စဉ်တိုးချဲ့စေလွှတ်တယ်လို့ ကိန်းဂဏာန်းကြီးကြီးနဲ့ လွှတ်တော်မှာ ဒုဝန်ကြီးဦးအေးကြူက ပြောနေပေမယ့် ပညာရေးကတော့ နှစ်စဉ်မပြောနဲ့ တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက် လိုက်လို့မမီအောင် ပျက်စီးနေတာ ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ပျက်စီးနေတာ ၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊ စည်းကမ်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဘာဆိုဘာမှ မသိအောင် အခြေခံကျောင်းတွေမှာရော၊ တက္ကသိုလ်မှာပါ ပျက်စီး နေပါပြီ။
တစ်ခုတော့မေးပါရစေ နိုင်ငံခြားကို ပညာတော်သင်တွေ နှစ်စဉ် ထောင်နဲ့ချီစေလွှတ်နေတာ အဲဒီ ပညာတော်သင်တွေ အမိနိုင်ငံပြန်လာတော့ ဘယ်လို ပြန်အသုံးချသလဲ၊ ဘယ်လိုနေရာပေးသလဲ၊ သူတို့ကို မူလနေရာ ၊ မူလရာထူးနဲ့ပဲ ထားတယ်မဟုတ် လား၊ ပိုတောင်မှ ဘေးဖယ်ထုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင် ဒုဝန်ကြီးပြောတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး အလကားပဲ မဟုတ်လား။ ပညာတော်သင်အများစုက အမိမြေကို ပြန်လာကြတယ် ၊ တချို့ပြန်မလာဘူး။ တချို့ပြန်လာပြီး အလုပ်ထွက်တယ်၊ တချို့ ပြန်လာပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ်၊ ဒါတွေဟာ ပညာတော်သင်တွေကို တန်ဖိုးမထားလို့ နေရာအတိုင်းအတာတစ်ခု မပေးလို့ဖြစ်တာ။ အမိနိုင်ငံပြန်လာတဲ့ ပညာတော်သင်တွေကို သူတို့ယူခဲ့တဲ့ ဘွဲ့နဲ့ထိုက်တန်အောင် ရာထူးနေရာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားပညာတော်ဌာနမှာ အခုထိရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေ၊ ရှင်းလို့မနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ပညာတော်သင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အမှန်တကယ်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ မြန်မာပြည်မှာ Interview (လူတွေ့/စာတွေ့) အဆင့်ဆင့်၊ ၀န်ကြီးရုံးပြီးတော့ နောက်ဆုံး သံရုံးဖြေဆိုပြီးတဲ့အပြင် ပါတီ/နိုင်ငံရေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ရော၊ မိသားစုအသိုင်းအ၀န်း၊ ဆွေမျိုးအားလုံး ကင်းရှင်းကြမှ သွားခွင့်ရကြတာမဟုတ်လား။ အခြေခံပညာမှာဆိုရင် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ဆုရဖို့ဆိုရင် ကုသိုလ်ကံထူးမှ တော်တော် ကံကောင်းမှ ရတာလေ။ အဲဒီလိုဆရာ၊ ဆရာမတွေ နိုင်ငံခြားကနေ ပညာသင်ပြီး ဘွဲ့တစ်ခုခုယူလာနိုင်ရင် မြန်မာပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က မမြှောက်စားသင့်ဘူးလား၊ နေရာမပေးသင့်ဘူးလား၊ သူတို့ယူလာတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ထိုက်တန်အောင် တစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်တာပေါ့ ဒါမှ ပညာရေးဟာ တိုးတက်မယ်၊ ဥပမာ- အခြေခံပညာကဆရာ၊ ဆရာမနိုင်ငံခြားမှာပညာတော်သင်ပြီး ဘွဲ့တစ်ခုခုရလာရင် ကျောင်းအုပ် အဆင့်ရာထူးပေးမယ်ဆိုရင် အဲဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့အနည်းဆုံး နိုင်ငံတကာပညာရေးအငွေ့အသက်ကိုရကြမှာပဲ၊ မြန်မာပြည်ကဒေါက်တာကျောင်းအုပ်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ကျောင်းအုပ်တွေထက်အများကြီးသာမှာပါ။ အခြေခံပညာမှာ နိုင်ငံခြားဘွဲ့ရဆရာ၊ ဆရာမတွေဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ လက်ချိုးရေလို့ရမှာပါ။ သူတို့တွေကိုသာ နေရာပေးလိုက်လို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားရင် အခြေခံကျောင်း အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင်တချို့မှာ နိုင်ငံတကာပညာရေးနည်းစနစ်တွေ ရှင်သန်ခွင့်ရမှာပါ။ အခုတော့ ပညာတော်သင်ပြန်လာတယ် ပြန်လာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဘာအကျိုးမှ မပြုဘူး နှမျောစရာကောင်းလိုက်တာ။ ဘွဲ့ပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုလည်း မလေးစားရာမရောက် ဘူးလား။
ဒုဝန်ကြီးဦးအေးကြူပြောတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေ အကျိုးရှိအောင်သုံးပြပါဦး ၊ အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းကပိုအကျိုးရှိ မယ်ထင်တယ်။ စာရွက်ပေါ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်နေကြမှာလား၊ စာရွက်ပေါ်မှာတင်လိမ်ညာလို့အားမရတော့ အခုတော့ လွှတ်တော်ထဲအထိ လိုက်ပြီး အကျိုးမရှိတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းမျက်လှည့်ပြနေပြီလား၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ (ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ) တင်ပြတဲ့အခြေအနေအရပ်ကို လေ့လာပေးပါ၊ သုံးသပ်ပေးပါ၊ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပေးပါ။ တင်ပြတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းပေါ်ကြည့်ပြီး ကောင်း၏ ဆိုး၏ဆိုပြီး မျဉ်းမသားလိုက်ပါနဲ့ ပြင်ပလက်တွေ့ဘ၀နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ပြီး ဖြစ်သင့်တာဖြစ်ရမှာကို ပြန်လည်ချေပဆွေးနွေးစေချင်ပါ တယ်။ ဒါမှ ၀န်ကြီးဌာနတွေရဲ့ On Paper တွေစနစ်လျော့ပါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားကြီးများ ပညာရေးကဏ္ဍ (အဆင့်မြင့်၊ အခြေခံ) စနစ်ပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးသလို လူတွေကိုပြောင်းဖို့လည်းလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ် တတ်သိနားလည် ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပညာတတ်၊ ပညာရှင်တွေ သူတို့နေရာမှာ အစားထိုးသွားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးကို သုတေသန စနစ်တကျလုပ်ပြီး ပြည်သူ့အသံ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအသံ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမစစ်စစ် (ဒေါက်တာ၊ စစ်ဗိုလ် မပါ)၊ ကျောင်းသားမိဘများအသံ အားလုံးရအောင်စုဆောင်းသုတေသနပြုပြီး ပညာရေးပြုပြင်နိုင်ကြပါစေလို့ မျှော်လင့်ဆုတောင်းလိုက်ပါ ရစေ။
ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ဘော်ဒါ ၊ နေ့အထူး၊ စာကျက်ဝိုင်း၊ ကျူရှင်၊ Guide၊ သုံးလပြတ် အဲဒါတွေမှ မထားနိုင်ရင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (ဆယ်တန်း) မအောင်ဘူး၊ အမှတ်ကောင်းကောင်းမရဘူး၊ ဂုဏ်ထူးမရဘူး၊ လို့ခံယူထားတဲ့မိဘနဲ့ အဲဒါတွေကို အားကိုးတဲ့ကျောင်းသားက ၉၀%လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ မိဘတွေကအပြိုင်အဆိုင်၊ ကျောင်းသား တွေက ကျောင်းကလွှဲရင်ပြီးရောနဲ့စာကိုအဓိကမထားပဲ[မထားတာမဟုတ် မထားမိတာ] အပြင်ကိုအားကိုးနေကြတယ်လေ။ ခေတ်ကိုက ဒီလိုဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်လေ။ မနှစ်က ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း မန္တလေးခရီးစဉ်မှာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (၂) ကျောင်း မန္တလေး အထက (၁၆၊ ၂၆) နဲ့ Private ကျောင်း (၂) ကျောင်းသွားကြည့်ရာမှာ Private ကျောင်းတွေက သူတို့ရဲ့ကျောင်းအဆောက်အဦအပြင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ အိပ်ယာ၊ ကုတင်တွေပါ Presentation မှာ တင်ပြကြတယ် ဒါဟာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုပဲ အဲဒီကျောင်းသားတွေကို ဘယ်မှာ Enroll လုပ်သလဲ အခြေခံပညာအထက်တန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းတွေမှာပဲ အခြေခံကျောင်းတွေမှာ စာရင်းသွင်း ၊ အခြေခံကျောင်းကဆရာ၊ ဆရာမ တွေကို အသုံးမကျကြောင်း၊ စာမသင်ကြောင်း၊ စာမတတ်ကြောင်း၊ ဝေဖန်တယ်လေ။ ကျောင်းသားမိဘနဲ့ကျောင်းသားတွေကို ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ မြှောက်ပင့်တယ်။ မိဘကလည်း အောင်ချင်ဇောတစ်ခုပဲသိတယ် ကျောင်းသားရဲ့အခြေအနေမှန်ကို မသိဘူး၊ နားမလည်ဘူး ကျောင်းကဆရာ၊ ဆရာမပြောတာကို နားမထောင်ဘူး အပြင်ကိုယုံတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ ဒီကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းကစပြီးနေလာတယ် ဆိုရင် အဲဒီကလေးရဲ့စာရိတ္တ၊ အမူအကျင့်၊ စည်းကမ်း၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ ကျောင်းစာဘာသာရပ် အားနည်းချက်၊ အားသာချက် အားလုံးကို ဆရာ၊ ဆရာမများကသိတယ်၊ အဲဒါကို န၀မတန်းရောက်မှ ဒသမတန်းရောက်မှ ကျောင်းကမကောင်းပါဘူး၊ ဆရာတွေစာသင်မကောင်းဘူး၊ စာမတတ်ဘူးဆိုပြီး အပြင်အားကိုးလာတယ်၊ ငွေတစ်ခုပဲသိတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက် ကျောင်းမှာစာရင်းသွင်း အပြင်မှာ အပြင်ဆရာတွေနဲ့နေတော့တာပဲ၊ စာမေးပွဲအောင်ရင်၊ ဂုဏ်ထူးပါရင် သတင်းစာထဲကနေ အပြင်က ဘယ်ဆရာတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းချီးကျူးဂုဏ်ဖော်ပြီး ဂုဏ်ပြုပွဲလေးတွေလုပ်ကြတယ်လေ။ စာမေးပွဲရှူံးရင် ကျောင်းက ဘယ်ဆရာက၊ ဘယ်ဆရာမက နဲ့အမျိုးမျိုးထောပနာပြုတော့တာပဲ၊ မိဘများသတိထားသင့်တယ် ဒီကနေဆရာ၊ ဆရာမတွေကို မဟုတ်၊ မမှန်တာပြောကြလို့ ကလေးတွေမှာ မဖြစ်သင့်ပဲ ဂိုဏ်းသင့် နေတယ်။ အဲဒီအပြင်ကတော်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ စာသင်စားတဲ့ ပညာရေးဘွဲ့တစ်စုံတစ်ရာ မရတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ဆေးကျောင်းသားတွေ၊ တက္ကသိုလ်ဆရာတွေ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေအားလုံးဟာ ဟောဒီအခြေခံကျောင်းကနေသင်ပေးလိုက်တာပဲ၊ အခြေခံကျောင်းကဆရာ၊ ဆရာမတွေက သင်ပေး လိုက်တာပဲမဟုတ်လား။
အပြင်လောကမှာ ရှိတဲ့ဘော်ဒါ၊ စာကျက်ဝိုင်း၊ နေ့အထူး၊ သုံးလပြတ်၊ ကျူရှင် တချို့တကယ်ကိုအားကိုးထိုက်ပါတယ်။ ဆရာကောင်းတွေရှိတယ် ၊ ကျောင်းဆရာစိတ်ဓာတ်အပြည့်အ၀ရှိတယ်၊ စေတနာထားတယ်။ (လူနည်းစုပေါ့နော်) အဲဒီဆရာကောင်း တွေကြောင့် အပြင်လောကဟာ နာမည်ကောင်းခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်းခေတ်မှာတော့ စီးပွားရေးတွက်နေကြပါပြီ၊ တစ်လကို ကျပ်တစ်သိန်းကနေ လေးငါးသိန်းအထိ လစာပေးထားတော့ ကျောင်းကဆရာ၊ ဆရာမတွေတောင် အသက် ၆၀ ပြည့်လို့ ပင်စင်ယူရင် သွားကြတယ်။ (နည်းလမ်းမကျလိုက်တာ အစိုးရတောင်ပင်စင်ပေးထားတာ အပြင်မှာ ပြန်ခန့်တယ်လို့) ။ တချို့ဆိုရင် လုပ်သက်ပြည့် (နှစ် ၃၀) နဲ့ ပင်စင်ယူတယ်၊ ဆေးပင်စင်ယူတယ် ၊ အလုပ်ထွက်တယ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အပြင်လောကဆီမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ စီးပွားတွက် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမဘ၀ကို စွန့် အပြင်ဆရာ၊ ဆရာမဘ၀ကို ခံယူသွားကြတယ်၊ ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားသင့်တာက ပညာရေးကို ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် [ဘက်စုံထောင့်စုံကနေသုတေသနပြုဖို့လိုမယ်ဆိုတာပဲ]
အဲဒီအပြင်လောကပညာရေးကို လူပါးဝအောင် (ကျောင်းပညာရေးကို စော်ကားအောင်) ဘယ်သူတွေလုပ်နေတယ်ထင်သ လဲ။ ရုံးချုပ်ကအရာရှိကြီးတွေပဲ သူတို့ စာသင်တာနားမလည်ဘူး ၊ စာတတ်တာနားမလည်ဘူး၊ အခြေခံပညာကျောင်းတွေကို နားမလည်းဘူး သူတို့သိတာ အခြေခံပညာကျောင်းဆိုတာ သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ ယူဆထားတယ်။ နားမလည်ဒါလည်းမပြောနဲ့ ဦးစီးမှူး၊ ဦးစီးအရာရှိဆိုတာ ရုံးစာရေးကဖြစ်လာတာ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆိုတာ စစ်ဗိုလ်ကဖြစ်လာတာ၊ စဉ်းစားတာကြည့် ပညာရေးမပျက်စီးပဲခံနိုင်ရိုးလား၊ အခုထိ ကျောင်း၊ ကျောင်းသား၊ ဆိုတာရှိသေးတာကျောင်းဆရာတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ အဲဒီရုံးချုပ်ကလူကြီးဆိုတဲ့လူတွေက နယ်ပေါင်းစုံက ကျောင်းသားတွေကို ကော်မရှင်ယူပြီး ဘော်ဒါအပ်ပေးနေတာ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေလည်းအတွန့်မတက်ရဲဘူး၊ လက်ခံဆိုရင်လက်ခံရတာပဲ။ အဲဒီလိုဆိုမှ တော့အပြင်ဘော်ဒါတွေ လူပါးဝပြီပေါ့ အားကိုးရှိတာကိုး။ အဲဒီအားကိုးက ရုံးချုပ်တစ်ခုတင်မကဘူး ဟိုအထက်အထိပါသေးတယ်။
ဘော်ဒါတွေမှာ ပညာရေးကပင်စင်ယူပြီးတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမတွေသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ဘော်ဒါဆောင်ဆိုတာ စီးပွားရေး တွက်ထားတာ။ဆယ်တန်းအောင်တွေ ပေါချောင်ကောင်း Guide တွေထားပြီး အဓိက ၁၀ တန်းကို နာမည်ယူကြတာလေ။ တခြား ၅ တန်းကလေ ၈ တန်းလောက်ကတော့ လုံးဝအလေးမထားဘူး ပျော်ရင်ပြီးရော၊ Guide တွေ၊ ဆရာတွေကလည်း B.Ed ဘွဲ့မရဘူး ဆိုတော့ ပညာရေးသဘောတရား၊ ကလေးစိတ်ပညာ၊ ကျောင်းသားအုပ်ချုပ်မှု သိပ်ညံ့တာ၊ ဒီတော့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားနဲ့ Guide နဲ့ပေါင်းမိပြီး ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီးနေတာပဲ၊ အခြေခံပညာကလာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့တော့လုံးဝ အဆင်မပြေဘူးလေ။ နောက်ဆုံးတော့ အခြေခံကျောင်းကလာတာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး ဆရာ၊ဆရာမတွေ ပင်စင်စားတွေ၊ ဘော်ဒါကနေ ထွက်ပြေးရတာပေါ့။
ပညာရေးကိုပြုပြင်မယ်ဆိုရင် အမှန်ကို မြင်ကြည့်ပါ၊ ဘက်စုံထောင့်စုံကနေဆန်းစစ်ပါ။ အပေါက်ကြီးလွန်းရင် လူကအပေါက်ကြီးထဲရောက်နေလို့ မမြင်ရပါဘူး၊ အပ်ပေါက်လောက်ရှိတဲ့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို လိုက်ကြည့်နေရင် မြန်မာ့ပညာရေးဟာ ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဆရာစိုင်းမင်း - ရေးသားပေးပို့ ထားတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
5/01/2012 09:07:00 AM
ပုံကို နှိပ်ပြီ SPECIAL TRIP ၀က်ဆိုဒ် မှာ ခရီးစဉ် အသေးစိတ် ဖတ်ရှုပါ
အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဂယာ ၊ ထိုင်း ၊ မလေးရှား ၊ စင်္ကာပူ သွားရောက်
လည်ပတ်လို သူများ SPECIAL TRIP နှင့် ဆက်သွယ်ပါ
နောက်ဆုံးရ သတင်း အပုဒ် (၁၀၀)
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းအထိ ကျနိုင်
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ ဝေဖန်ရေးသား ထားတဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဆိုသူကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၇ ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထား...
စေတီပုံပါ အထည်စများ ရောင်းချခဲ့သော အထည်ဆိုင် ပိတ်သိမ်းထားရ
ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီပုံပါ ပိတ်ထည်စများ ရောင်းချမိ၍ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာဈေး အတွင်းရှိ မေခလာသိန်း အထည်ဆိုင်ကို ဆက်လက် ရောင်းချခြင်း မပြုရဲတော့ဘဲ ပိတ်...
ကသာမြို့အနီး ရွာတစ်ရွာတွင် ၁၅နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
ကသာမြို့နယ်အပိုင် ၊မိဿလင်းအုပ်စု၊ ပန်းခါးတောင်တွင် အသက်၁၅နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ အဓမ္မပြုကျင့်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်၊ နောက်ဆုံ...
ပြည်မြို့တွင် စုံတွဲတစ်တွဲကို စစ်သားသုံးယောက်က လူသတ်ပစ္စည်းလု
၂၃.၄.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ည ၈း၃၀ ခန့်အချိန်၌ ပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတား အောက်ရှိ ရှုခင်းသာတွင် စုံတွဲတစ်တွဲကို စစ်သားသုံးယောက်မှ လုယက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ေ...
ပြည်မြို့တွင် ဆရာတော်အား ဓါးဖြင့်မွှန်ပြီး ၀မ်းဗိုက်ကို ဓါးဖြင့်ထိုးမှု ဖြစ်ပွား
ပြည်မြို့ ပွင့်လှသိမ်ကုန်း ရက်ကွက် ပုညစေတီတော် ပုညဓမ္မာရုံမှာ ဆရာတော် ဦးသောဘိတ သက်တော်(၈၂)) ၀ါတော်(၆၂) ရှိ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဘုရားကြီးအား ...
ဦးကျော်သူတို့ အမှိုက်ကောက်မည့်အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန်
“ ဖွ ” အဆောက်အဦးတစ်ခု တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက အခြေခံအောက်ခြေအုတ်မြစ် ခိုင်မာမှုရှိရန် အရေးကြီး လှသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုဖြစ်ရန် သန့်ရှင်းမှုသည် အဓိက...
မေခလာသိန်း အထည်ဆိုင်က ပိတ်စတွေပေါ်မှာ စေတီပုံတွေ.ရှိတဲ.ကိစ္စရှင်းလင်း (ရုပ်/သံ)
မေခလာသိန်း အထည်ဆိုင်က ပိတ်စတွေပေါ်မှာ စေတီပုံတွေ.ရှိတဲ.ကိစ္စ နဲ.ပါက်သက်ပြီး တကယ်.ဖြစ်ရပ်မှန်ကို သိရှိနိုင်ဖို.အတွက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုက...
သာသနာညိုးနွမ်းစေမှုနဲ့ ၀င်းဝင်းစိန်ကို စွဲချက်တင်
ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကံမြို့ ပဋိပက္ခကို စဖြစ်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးကို ရဲတွေက သာသနာကို ညိုးနွမ်းစေမှုနဲ့ စွဲချက်တင်...
ပြည်မြို့ က စစ်သားသုံးဦး လုယက်သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဇာပန လိုက်ပါပို့ ဆောင်သူများ “အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးပါ” ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော် (ရုပ်/သံ)
အမှန်တရားကို လိုလားသော ပြည်မြို့သူမြို့သားများမှ ၂၃.၄.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ည ၈း၃၀ ခန့်အချိန်၌ ပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတား အောက်ရှိ ရှုခင်းသာတွင် စုံတွဲတစ်တွဲ...
စော်ဘွားကြီးကုန်းဝင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ၃ ဦး သေဆုံး
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်မြို့နယ် စော်ဘွားကြီးကုန်းမှာ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချတဲ့ ၀င်းအတွင်းက ငွေလမင်းသံပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှာ ဒီနေ့ နေ...
© Myanmar News Now Copyright by Thit Htoo Lwin
Template by သစ်ထူးလွင်
နေ့စဉ်သတင်း | နေ့စဉ်ရုပ်ရှင်